Nepal Dayari | जो जग्गा बाँड्दै हिँड्थेँ, बाढी पसेको आफ्नो करोडौको घर देखाउदै भन्छन्: बाढीले आफैँ सुकुम्बासी बनेँ’(भिडियो सहित)
जो जग्गा बाँड्दै हिँड्थेँ, बाढी पसेको आफ्नो करोडौको घर देखाउदै भन्छन्: बाढीले आफैँ सुकुम्बासी बनेँ’(भिडियो सहित)
असार ३, २०७८ बिहिबार ३२८ पटक हेरिएको
मेलम्ची। बर्सेनि विपत्ति, भवि, तव्यबाट ता डित बन्दै आएको सि; न्धुपाल्चोक यसवर्ष वर्षा त्को सुरुमै बाढीको चपेटामा परेको । गत वर्ष भदौ २७ गते पू र्वी सिन्धुपाल्चो को बाह्रबिसे नगर क्षेत्रको नागपुजे मा अक ल्पनीय पहिरो गए को थियो । समथर भू भाग पनि पहिराले भोटेकोसी नदीमा मिसाइ दिएपछि त्यहाँका ८० घर परिवार विस्थापित हुन पुगेका थिए । अहिले पनि त्यहाँका नागरिकले घर बनाउन सकेका छैनन् । त्रि पालको ओतमुनि रात बिताउनु परिशरहेको छ।
“घरखेत सबै बगाएर सुकुम्बासी नै तुल्याए पनि मैले आफूलाई राहत आवश्यक पर्ने देखेको छैन । तर, यहाँ कयौँ यस्ता परिवार छन् । उनीहरू हातमुख जोड्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । अकल्पनीय बाढी आएकाले कतिपयले आफ्ना लुगाफाटोसमेत निकाल्न पाएनन् । उनीहरूलाई तत्काल राहत र बासको आवश्यकता छ । यो कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? उनीहरूलाई सरकार, राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति कसरी दिलाउने ? आजको मुख्य चुनौती यही हो,” उनी सुनाउँछन्।-बाह्रखरीबाट